မျိုးကြီး - အခမ်းနားဆုံး [2004 Album] - Mg Shan Lay
Home Album မျိုးကြီး မျိုးကြီး - အခမ်းနားဆုံး [2004 Album]
မျိုးကြီး - အခမ်းနားဆုံး [2004 Album]
4:07:00 PM Album, မျိုးကြီး,
4. ရင်ခုန်သံ အရင်းနှီးဆုံး
8. ရန်သူ တစ်ထောင်
Mg February 22, 2017 at 5:03 PM
အစ်ကိုရေ အခုလို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ တခြားနေရာတွေမှာ ရှာရတာမလွယ်တော့ဘူး။
အခမ်းနားဆုံး နဲ့ ရင်ခုံသံအရင်းနှီးဆုံး က ပျောက်နေတယ်ဗျ။ သူတို့အစား မင်းငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးနောက် နဲ့ ငါ့ဘုရင်မ က ၂ပုဒ်ထပ်နေတယ်။ အဲဒါလေး အဆင်ပြေရင် ပြင်ပေးပါဦး။ ကျေးဖူးတယ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Shan Lay March 22, 2017 at 1:36 PM
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ ခုလိုပြောပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် . . ကျွန်တော်အားရင်ပြင်ထားပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ . . . :-bd